Izizathu ezi-5 zokungavakatyeli iikholeji ngexesha lokuphuka kwehlobo
Indlela Yokutshabalalisa Iholide Yakho Yesihlobo kunye nezinye Iingcebiso ezifanelekileyo
Ubulumko obuqhelekileyo kukuba ukuba ukutyelela kunye neekhenkethi zokutyelela ngexesha leeholide zasehlotyeni lihlakaniphile, indlela yokuhlawula ibhajethi indlela yokubulala iintaka ezimbini kunye nelinye ilitye. Ubulumko obuqhelekileyo bungafanelekanga. Nazi izizathu ezinesizathu sokuba:
Iikholeji ziyanqabile ehlobo. Iikholeji zeekholeji zihlala zilahlwe ngexesha lokuphuka kwehlobo kunye neeholide ezinkulu, ngoko awuyi kuvakalelwa kakuhle oko isikolo kwaye, ngokubaluleke ngakumbi, abantu bafana. Umbuzo obaluleke kakhulu, umbuzo obalulekileyo umfundi kufuneka azibuze kuye kwikholeji yekholeji kukuba, "Ngaba ndihlala apha?" Akukho namnye oya kukwazi ukuphendula okokuba loo nto, i-campus eqhelekileyo iya kuziva ihluke kakhulu xa kukho abantu abangaphezu kwama-30 000 abajikelezayo.
Ukutyelela kunqongophala kwaye ubuchule abukho. Awuyi kufumana iindwendwe ezimbini-iintsuku kunye ne-faculty tete-a-tetes ngexesha leenyanga zasehlotyeni. Uninzi lwe-faculty luhlala eholide, kwaye iindwendwe zihlala zincinci ukuya ezimbalwa ngeveki. Unokuhlala uhlala kwisikolo esikolweni sasehlotyeni, kodwa akuyi kuba yinto efanayo. Isikolo sasehlobo sisoloko sincinci kwaye sasihluke kakhulu kumava ekholeji.
Abafundi banzima ukufumana. Ngona inqununu yesikhokelo sokutyelela i-campus ine-bias ehambelanayo - ihlawulwa yikholeji ukufumana abafundi abatsha. Ngoko inxalenye yinjongo kuyo nayiphi na ityelelo lekholeji ukufumana abafundi abaqhelekileyo abakulungele ukuthetha ngamava abo. Ngethuba lonyaka wesikolo, uya kubafumana emanyanisweni wabafundi, iidorho, iiholo zokufunda, i-quad nakwezinye iindawo. Ngexesha lehlobo? Bona into # 1.
Iikholeji zeKholeji azihlali okanye zihlekise. Ukutyelela ngokukodwa kwikholeji yindwendwe ehamba phambili, ehamba ngeeyure eziliqela, kunye ne-ajenda ekhawulezileyo kunye nohlu lwemibuzo ebalulekileyo yokufikelela. Ngoko ukudibanisa iholide yentsapho yakho kunye noluhlu lweeholeji zekholeji yindlela eqinisekileyo yomlilo yokuphazamisa nayiphi na indlela yokuphumla. Uzakufuna iholide ukusuka kwiholide yakho.
Abazalwana abancinci baya kukuthiya. Akulungele naluphi na umntakane oncinci kunomntu osisigxina okanye unyaka omdala wesikolo esiphakeme. Baya kukhawuleza baxake iindwendwe ezingapheliyo kunye nokubethisa (kubo, nantoni na) ukuthetha. Kwaye xa uthembela ukuba ubenqabile, abayi kukukhumbula iinkcukacha zeli khampasi xa lixesha lokuba bafake izicelo, ngoko kuya kufuneka ubuye kwakhona. Kungcono ukuzithumela kunye neqabane lakho ukuba ubone sightsee okanye udibane kwisibini se-motel, okanye ungazami nhlobo.
Ulwakhiwo oluxhasayo kunye neelwimi
Ukuqonda nokusebenzisa i-Simple Tense Time
IGeorgeown College GPA, SAT kunye ne-ACT Data
Ububanzi beevili kunye neTire Fitments
Iingoma zeB Bowling zichazwe
Iziseko zokuSondeza: Indlela yokuTlhaba ebusuku